गफ ! .....: February 2013
मुक्तक : पाँच मनोहर मुक्तकहरु
मुक्तक म खासै लेख्दिनँ । निक्कै पहिले लेख्थें मुक्तकको संरचना र मर्म नबुझी नबुझी, पछी मुक्तक लेख्नै छोडियो । झुक्किएर बिच-बिचमा लेख्नै पर्यो भनेर करले एकाध लेख्ने कुरा अर्कै हो । अचेल् फेरि मुक्तकले मन तान्न थालेको छ । फेसबुकको यौटा ग्रुप मुक्तक मनोहरमा केही परिचित र मुक्तक प्रेमी साथीहरुको संगतले मैले नयाँ पुराना केहि मुक्तकहरु फोटो सहित राखेको छु । तिनैबाट मनोहर मुक्तक भनेर पाँच वटा यता ब्लगमा ल्याएको छु । आसा गर्छु ब्लगमा पढ्नुहुनेलाई मुक्तकहरु र फोटोहरु मनपर्ने छ ।
अनायास याद आउँछ र मन लुटेर जान्छ
मुटु चसक्क हुन्छ सुस्केरा छुटेर जान्छ
बस्छ गढेर झन् झन् तिम्रो याद कलेजोमा
निठूर समयसँगै एक-एक चिनो फुटेर जान्छ ।
यो बेला गुलाफको राम्रो व्यापार हुनसक्छ
देखाउँनलाई एकैदिनको प्यार हुनसक्छ
हो, राम्रै हो प्यार भएको तर होस राख्नु
देखासिकी प्यारले जिवन अन्धकार हुनसक्छ ।
जाही फुलेन जीवनमा
चुवा फुलेर हेला भो
माया फक्रेन जीवनमा
वैंश फक्रेर खेला भो
गंभीरता छाएन जीवनमा
सर्वथा रेला रेला भो ।
सुन्थें चारैसुर तुनाले कसिएकी चोली हुन् तिनी
पहाड मैदान सब नाघ्दै बगिजाने खोली हुन् तिनी
एकदिन सुटुक्क आएर पसिन् मेरो आँखाबाट र
छाति भ्वाङ पारेर निस्किंदा बुझें गोली हुन् तिनी ।
सुक्छ घाममा, बग्छ पानीमा, उड्छ हावामा
भान्सेहरु अब पाक्छ मीठो भन्छन् दावामा
तर चर्को बल्छ यो देशको चुल्होमा आगो सधैँ
र शान्ति, सम्बृद्धी नामको रोटी डढ्छ तावामा ।
Posted by दीपक जडित at 3:11 AM3comments: Links to this post
कविता : फेब्रुवरी चौध
मेरो लागी तिमीले पकाएको सेलरोटी
तिम्रो लागी मैले पकाएको सेलरोटी
दुबै ढँग नपुगेर
जब ह्रदयको आकार लिन्छन्
म सम्झन्छु स्कूले ति दिनहरु
कागजमा कोरेर पानको पात बनाइरहेको
र कस्को कस्को नाम लेखिरहेको
त्यतिबेला, जति गरेपनि
पानको पात गोलो मात्र हुन्थ्यो ढंग नपुगेर
यतिखेर, जति गरेपनि
सेलरोटी ह्रदयाकार मात्र भएको छ ढंग नपुगेर ।
तिमी पनि सम्झनु आज एकैछिन
ढंग नपुगेका स्कूले ति दिनहरु
कागजमा पानको पात बनाइरहेको
त्यसमाथि कसैको नाम कोरिरहेको
यथार्थमा हामीसँग छँदैछ
हामीले बनाएको सेलरोटी जस्तै
ढंग नमिलेर पनि
प्यारो यो फेब्रुवरी चौध!
खुशीको यो प्रणय दिवस!
जो फर्केर आइरहन्छ जीवनमा
सेलरोटी बनाउने दिनहरु जस्तै
ल्याउँदैन तर फर्काएर
कागजमा पानको पात कोरिबस्ने दिनहरु
पानको पातमा कसैको नाम लेखिबस्ने दिनहरु ।
अब कि तिम्रो नाम हुन्छ लेख्नलाई
कि मेरो नाम हुन्छ लेख्नलाई
कुनै ठूलो हिसाबको भुक्तानी प्रमाणित गर्दै
हरेक फेब्रुवरी चौधमा ।
Posted by दीपक जडित at 2:36 AM No comments: Links to this post
पुस्तक गफ : घर फर्किरहेको मानिस
घर फर्किरहेको मानिस
चर्यात् चर्यात् पारेर
पाना पाना छुट्याउँदै पुस्तकबाट
जतनले पट्याएर गोजीमा बोकेर हिडुँ !
एउटा अक्षर पनि नछोडिने गरेर
प्वाक् प्वाक् उखेलुँ मन परेका सबै पत्ताहरु
डल्लो पार्दै खाऊँ, चपाऊँ, निलुँ !
प्रिय कवि, म के गरुँ ?
मेरो वाल्यकाल, मेरो लक्का जवानी
मैले भोगेको जिन्दगी, मैले कल्पेको स्वर्ग
यि सबै सबै भन्दा
कता हो कता राम्रो
मेरो हातमा तिम्रो कविताको किताब छ ।
घर छोडेको मानिसको हातमा
घर फर्किरहेको मानिस छ ।
रमेश क्षितिजको 'घर फर्किरहेको मानिस' कविता संग्रह खुरुखुरु दुईपल्ट पढें । पहिले शुरुदेखि अन्तिमसम्म, प्रत्येक पेजमा लेखिएका एक एक अक्षरहरु नछोडिकन पढें । विषय क्रम र त्यो भन्दा अगाडिका कुराहरु चैं पढ्न भनेर होइन तथापि पढें, छापिएका र लेखिएका अक्षरहरु समेत । हो, लेखिएका पनि छन् केहि अक्षरहरु कविकै हस्ताक्षर सहित मेरो नाम उल्लेख गरिएर । हरेक पाठकले कवि, लेखकको हस्ताक्षर सहित उसको नाम पनि उल्लेख गरिएर किताब पाउँदा जस्तो खुशी महसुस गर्छ मैले त्यस्तै नै महसुस गरें । कति प्रिय क्षण, कति गर्विलो पल किताब पल्टाएर लेखिएका अक्षरहरुमा पहिलो पल्ट नजर परेको क्षण ।
(यहाँ साथी सीमु श्रेष्ठलाई सम्झिइँन भने मलाई पापै लाग्ला । वहाँले भनेको, भनेको किताब खोजेर पठाई मात्र दिनुभएन यसरी सम्भव भएसम्म हस्ताक्षर समेत गराएर पठाइदिनुभयो । मैले किताबभित्र कविको हस्ताक्षर सहित लेखिएको अक्षरहरुमा कत्रो लोभ गरें भने किताबको तस्वीर खिच्दा समेत तिनै अक्षरहरु देखाउने त्यो लोभलाई सम्वरण गर्नै सकिनँ ।)
दोश्रोपल्ट अन्तिमदेखि पहिलोसम्म कविताहरु मात्र पढें । त्यसपछि पनि 'घर फर्किरहेको मानिस'लाई थन्क्याएर राखेको छैन अरु पढिरहेको किताबहरुको बिचबिचमा पढ्ने गरेर पायक पर्ने ठाउँमा राखेको छु र पल्टाएर जुन कविता पल्टिन्छ, तेहेर्याई चौहर्याई पढिरहेको छु ।
पहिलोपल्ट 'घर फर्किरहेको मानिस' पढ्दा म 'ताप' पढ्दैथिएँ । शारदा शर्माको 'ताप' पढ्दा विश्राम चाहिन्छ भन्ने महसुस भएको बखतमा अलिकति पढिहालुँ न भनेर पल्टाएको थिएँ 'घर फर्किरहेको मानिस' तर दुईपल्ट लगालग पढिनसकी म 'ताप'मा फर्केर गइनँ । 'घर फर्किरहेको मानिस'मा के छ त्यस्तो? आफैंलाई सोधेँ पनि मैले । धेरैदिन देखि 'घर फर्किरहेको मानिस' माथि केहि लेख्छु भनेर पनि राखें मनमा । तर के लेख्ने? के छ किताबमा? कविताहरुमा ? अन्यौल जस्तो भै रह्यो । कुनै कविता भेटिएनन् यो चैं अलि यस्तो भयो भन्नलाई । सबै राम्रा कविताहरु । राम्रै राम्रा र राम्रै राम्रा मात्र कविताहरु । सबै राम्रै राम्रो छ मात्र भन्नलाई के लेखिरहने जस्तो समेत भएको हो मलाई । तर पुरै किताबको रिभ्यू लेखे जत्तिकै कुरा मेरो मनमा भने कविता नै बनेर उम्रँदै थियो । पहिले त्यसैलाई उमारें र कविताकै अकारमा ल्याएपछि आज पुरै किताबको निजी हिसाबले चर्चा गर्न बसेको छु, उक्त कवितालाई यो चर्चाको सुरुमै राखेर ।
जम्मा ४५ थान कविताहरु संग्रह गरिएको यस किताबमा कुनै पनि कविता लामा छैनन् जो पढ्दा पढ्दै दिक्क लागुन् । बरु सबै कविताहरुमा यस्तो लाग्छ कि अझै अलिकति लामो किन भएनन् कविताहरु? कविताहरु शुरु हुनुभन्दा अगाडि 'पहिलो प्रेम र प्रिय कविताहरुको आत्मकथा' भनेर लेखकीय जस्तो या भनौं कविताको भूमिका जस्तो लेखिएको छ नौ पाता(१८ पेज)मा । कुनै राम्रै साहित्यिक उचाई भएको आख्यान पढ्दा जत्तिकै स्वाद र काव्यिक सन्तुष्टी दिने उक्त भूमिकामा कति धेरै कुरा अटाएका छन् भने सबैको मिहिन चर्चा गर्दा अर्को छुट्टै किताब बनाउन सकिन्छ । कविताहरुको मूल्य के हो? कविताको महत्व के? जस्ता गंभीर कुराहरुको गहिराई केलाइएको आत्मकथामा कवि भन्छन्, 'कविता अभौतिक वा पराभैतिक हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै हामी यसको बजार मूल्य निर्धारण गर्न खोज्छौं । समस्या यहीँनेर उत्पन्न हुन्छ ।' त्यसैमा कवि लेख्छन्, 'कवितामा प्रयोग गरिएका शब्दहरु भन्दा पनि पर केही हो, कविता । कैलेकाहीँ शब्दहरुबीचमा, स्पेसमा समेत लुकेको हुन्छ अर्थ र कहिलेकाहीँ प्रश्नचिन्ह, विश्मयादिबोधकमा पनि ।'
यो भूमिका जस्तै आएको कविताको आत्मकथाले मलाई कविता लेखिनुमा त कला छँदैछ, पढ्नु र बुझ्नुमा पनि कला चाहिन्छ भन्ने सिकायो । संग्रहभित्रका थुप्रै कविताहरुका पृष्ठभूमीहरु समेत फेला पर्छन् यो आत्मकथामा ।
लेख्न त म आफ्नै हातले लेख्छु
तर कस्ले सिकाउँछ मलाई कविता?
कस्ले दिन्छ नवीन र अक्षत विम्बहरु?
कस्ले दिन्छ एउटा मौन र अर्थपूर्ण भाषा? भन्दै आत्मकथामै कवि भन्छन्, 'कवितामा विचार वा कला? सरलता वा दुरुहता? लोकप्रियता वा स्तरियता? यो कुनैपनि प्रश्न मेरा लागि प्रश्न नै होइनन् । अल्झिन चाहन्नँ म कुनैपनि अनर्थहरुसँग, म त असली कविता लेख्न चाहन्छु । सिंगो कविता, सम्पूर्ण कविता ।'
वास्तवमै अचेल कविताहरु शहर जस्तै बनेका छन् । उँचा उँचा घरहरुले भरिएको, झिलीमिली, मन लोभ्याउँने तर भित्र पसेपछि शहरले जस्तै उकुशमुकुश पार्ने । यस्तोमा 'घर फर्किरहेको मानिस'भित्रका कविताहरु पढ्दा प्राकृतिक सौंदर्य यथावत रहेको कुनै गाउँमा वास वस्न गएझैं अनुभूत हुन्छ । सिङ्गो, सम्पूर्ण र असली कविता पढें भन्ने अनुभूत हुन्छ संग्रहका हरेक कविताहरु पढ्दा । मसँग कुनै यौटा मात्र कवितालाई टिपेर यो यस्तो र यसकारणले राम्रो भन्न सक्ने आधार नै छैन । हरेक कविताहरु रेटेर जान्छन् हाम्रो ह्रदयमा तह क्रम मिल्दामिल्दै बाँकि रहेका संवेदनाहरुलाई र यस्तरी दुरुस्त मिलाइदिन्छन् कि यस्तो लाग्छ, होइन यो कविता आज पढिरहेको भन्दा पर पनि केहि थियो; जो भोगिएको थियो, देखिएको थियो वा सुनिएको थियो । त्यसैले हरेक कविताहरु बस्छन् ह्रदयमा सानो सानो छाप्रो हालेर । ह्रदयको प्रिय भएर । कविता पढिसकेपछि पनि लामो समयसम्म ह्रदयमा रन्किरहन्छन् हरेक कविताहरु मानौं कसैले काँसे थालबटुकामा प्यारपूर्वक सानो छडीले हिर्काएको होस् झन्कार सुन्नलाई ।
पटक पटक पढिरहँदा कविताको चिरफार समेत गर्दै ब्लग लेख्छु भन्ने पनि थियो मेरो सुर । जुन यसरी कवितामै मठारियो -
कम से कम कप्टेरा चाहिन्छ बाँसको
ए नादान कर्द,
सिन्काहरु कुन आँटले चिर्न खोज्दैछौ तिमी
तिम्रो जस्तै ह्रदयका दुना टपरीहरु ।
कवितासँग कहीँ कतै अवश्य मेरो पनि प्रेम थियो । पहिलो प्रेम नै भने हुन्छ । साहित्य भनेर पढ्नलाई जे पढेको भएपनि लेख्नलाई मैले पनि धेरैले जस्तै कविता नै लेखेको हुँ पहिलोपल्ट । र कविता निरन्तर लेखिरहेँ, हिँजो अस्तीसम्म । तर पछिल्लो बेला(हिँजोआज) कविता लेख्न खोज्दा पनि म कविता लेख्न नसकेको अवस्थामा हुन्थें । लाग्थ्यो अब कविताको यूग फेरिइसकेको छ । मैले जेलाई कविता भनेर लेखें, लेखिरहेथें ति सब अब कविता हुन लायक रहेनन् । अब कविता बनाउन शहरको घडेरीमा जग खन्नुपर्छ, सिमेन्ट, ईँटा, बालुवा मिसाएर उठाउनुपर्छ आधुनिक विल्डिङ्ग । थप्नुपर्छ तलैतला आकाश छुवाउने गरेर । नत्र कविता हुँदैन । यस्तै बुझ्न, यस्तै स्विकार्न थालिसकेको थिएँ आजभोली म ।
'घर फर्किरहेको मानिस' पढेपछि लाग्यो - अझै पनि गाउँघरतिरै गएर कुनै पनि पाखो भित्तोमा आठ दशवटा डोविल्को खन्यो, खाँबोखुट्टी गाढ्यो र खर परालले छाएर धुरी मार्न सक्यो भने हुनेरहेछ घर जस्तो सुन्दर कविता । कविता त ऋषी मुनीहरुको छाप्रोझैं उभ्याउनु मात्र पर्ने रहेछ कतै प्रकृतिको काखमा । आफैं बनाउने रहेछ कविताले आफ्नो असली पहिचान । र लेख्न जोश आएको छ आफुले ह्रदयमा महसुस गरेजस्तै दुरुस्तै कविता । सायद अब लेख्न थाल्नेछु फेरि कविताहरु म ।
पुस्तकमा क्षितिजका कविताहरुको बारे वरिष्ठ कवि तुलसी दिवसले भनेका छन् - नवीन, मौलिक र जुठो नपारिएका निजी विम्बहरुको प्रयोग गर्छन् उनी । सत्य हो । 'मेरो गीत'मा कवि लेख्छन् -
मेरो गीतको पानामा
कस्ले निभायो जल्दै गरेको चुरोटको ठुटो?
हठात कुल्चेर गयौ तिमी मेरो गीतको पहिलो अन्तरा !!
'पिपलबोट'मा लेखेका छन् -
चौतारीमा बसेर सोचिरहन्छु म
कसैलाई पर्खिरहेको मान्छे त थिएन यो पिपल?
मैले माथिनै भनेको छु । कुन कविता टिप्ने यो राम्रो भनेर देखाउनलाई? कविताको कुन हरफ लेख्ने यो अहा! भन्नलाई? मैले आफ्नो तर्फबाट भन्नसक्ने त शुरु गरेको कवितामै भनेको छु ।
यतिखेर धरान शहरमा कविता सुनाइरहेका होलान् कवि रमेश क्षितिज । उनको 'घर फर्किरहेको मानिस' पढ्दैगर्दा फेसबुकले जानकारी दिइरहेको छ; क्षितिजका कविता प्रेमीहरुले धरानमा 'फ्यान क्लब अफ् रमेश क्षितिज' बनाएकाछन् । र तिनै प्रेमीहरुले बनाएको फ्यान क्लबको आयोजनामा क्षितिज यतिखेर धरानमा कविता सुनाउँदैछन् । यता म सुन्दैछु उनको आवाज, ह्रदयले, उनको किताबका पाना पानामा ।
क्षितिज यसरी 'जीवन गीत' सुनाइरहेछन् मलाई -
निस्कनु - आँसुको ऐना हेर्न छोडेर
कुल्चँदै सुकेका पातहरुजस्तो उदाशीको सुरुङबाट
आफैंले बनाएको निराशाको अध्याँरो
तारबारबाट निस्कनु र हेर्नु
पल्लोतिर भेटिनेछ इन्द्रेनीको स्वागतद्वार
डाली डालीमा उफ्रिँदै नाचिरहेका चराहरु
हजारौं ठेस सहेर सङ्लिँदै हिँडेको बटुवा नदी
विजय जुलुसमा सामेल
अबिरले रंगिएका आशावादी जनताजस्ता रंगीन फूलहरु
फैलिँदै गएको सपनाजस्तो निक्खर आकाश
वा मानिसको आशाजस्ता झिल्मिल ताराहरु
तिमीसँगै हुनेछ बाँच्नलायक
एउटा सिंगो र सुन्दर पृथ्वी
जसलाई तिमीले दुख भन्यौ
त्यो त तेजाबी गहना
तिम्रा मखमले आँसुका पत्रै-पत्रहरुले बुनेको
जसलाई तिमीले चोट भन्यौ त्यो त मायालु स्पर्श
कुनै महान कलाकारले रुखो ढुंगालाई
ताछ्दै मूर्ति बनाएजस्तो
तिम्रो जीवनलाई निखार्ने एक तिक्खर अनुभूति
साँच्ची एकपल्ट बाँच्न जानेपछि
जति निमोठ्यो उति पलाउँछ जीवनको मुना!
जुन दु:खले दुखें भन्छौ तिमी
त्यो आफैंले रोपेको बिरुवा - आफ्नै मनको गमलामा
बार्दली वा भर्याङमा
वा पस्ने ढोका छेउ आँगनको एक कुनामा
आफैंले उमारेको दु:खको क्याक्टस
बढ्दैजान्छ दिन प्रतिदिन
र त्यसैमा अल्झेर रगतपच्छे हुन्छौं हामी अचानक
र सराप्न थाल्छौं पुराना मित्रजस्ता दु:खहरुलाई व्यर्थै
समाचार वाचिकाले झैं मुस्काएरै झेलिदिनू दुखको खबर
नदुख्नू - माझेर राख्नु बरु त्यो पुरातात्विक दु:ख
प्रत्येक इमेलमा आएको तिम्रो आँसुको पारदर्शी टाटो
असह्य लाग्छ मलाई !
Posted by दीपक जडित at 6:45 AM3comments: Links to this post
लघुकथा : विज्ञापन
महानगरबाट निस्कने राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा एकदिन यस्तो विज्ञापन छापियो -
"......म फलानो ठाउँ बस्ने, फलानो ठाउँ काम गर्ने, यति वर्ष उमेरको, यस्तो नाम भएको पुरुष वैवाहिक जीवनको झमेलामा पर्न नचाहने तर आफ्नै एउटा सन्तानको ईच्छा राख्ने भएकोले मेरो सन्तान प्राप्तिको ईच्छा पुरा गरिदिनको लागी मबाट गर्भधारण गर्न ईच्छुक यति देखि यति वर्ष उमेरभित्रका ईच्छुक महिलाहरुले मलाई फलानो फलानो माध्ययमबाट सम्पर्क गर्नुहोला । मेरो निमित्त नौ महिना गर्भ धारण गर्न ईच्छुक र योग्य महिलाको लागी मैले आफ्नो गच्छे अनुशारले साँढे पाँचलाख रुपैया पारिश्रमिकको व्यावस्था गरेको छु ।
पुनश्च: रकम लिएर सन्तान हस्तान्तरण गरे उपरान्त सन्तानमा कुनै पनि प्रकारको अधिकार रहने छैन भन्ने कुरामा पूर्व सहमती हुनुपर्ने प्रावधान छ ।....."
विज्ञापन मानौं कि वारुदको गोदाममा सल्केको आगो भयो । एकैसाथ देशभरी चर्चा चल्यो । धेरैले जिब्रो काढेर भने, 'मान्छे त ठीस हो कि के हो? यस्तो विज्ञापन पनि नाम ठेगाना तोकेर दिन्छन् कसैले?' कतिले मनमनै समस्या सल्टिने थियो भनेर पनि विचार गरे होलान् ।
कुरा त्यतिमै मात्र सीमित रहेन । देशभरीबाट बिभिन्न महिला सङ्घ सङ्घठनहरुको विरोध र्‍याली निस्कन थाल्यो र विरोधको स्वरुप बद्लिएर देशभर हड्तालको स्थिती बन्यो । उसले नारी अस्मिताको धज्जी उडाएको, मातृत्व किनबेच गर्न चाहेर सम्पूर्ण आमाहरुको खिल्ली उडाएको, समाजको विद्यमान सामाजिक संरचनामा गहीरो खलल पुर्याउन खोजेको जस्ता दर्जनौं आरोपहरु सहित देशभरका अनेक ठाउँमा उसको गिरफ्तारीको लागि उजुरीहरु परे ।
दशकौंदेखि स्थीर हुन नसकिरहेको देशको टालेटुले सरकार स्वयं त्यस विज्ञापनले एकैदिनमा धरापमा पर्न सक्ने परिस्थिती बनाईदियो ।
भोलीपल्ट, प्रत्येक दिन विभिन्न प्रलोभनमा परेर, डराईएर, धम्क्याईएर सयौं नारीहरु बलात्कृत भएर विना बाबुका सयौं बच्चाहरु जन्मने देशको आदर्श प्रशासनले ईमान्दारी साथ आफ्नो ईच्छा अनुशारको विज्ञापन छपाउने व्याक्तिलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा लियो ।
भोलीपल्टै, उक्त व्याक्ति पक्राउ परेको खबरलाई महिला अस्मिताको रक्षाको निमित्त आफ्नो विजय ठानेर देशभरीका महिला सङ्घ सङ्घठनहरुले ठाउँ ठाउँमा विजय सभा आयोजना गरे । यता हिरासतमा लिइएको व्याक्तिको मानसिक अवस्था जाँच गराईंदैथियो । उता महिला सङ्घ सङ्घठनहरुको सयौं ठाउँमा भैरहेको विजय सभाहरुमा सयौं बलात्कारीहरु नारीहरुको पक्षमा वकालत गर्दै भाषण गर्दैथिए, हजारौं बलात्कारीहरु समर्थनमा ताली बजाईरहेका थिए ।
(केहि समय अघि नै लेखिएको यो कथा फेसबुकको लघुकथा कुनो नामक ग्रुपमा प्रकाशित भैसकेको हो ।)
Posted by दीपक जडित at 3:39 AM No comments: Links to this post